ब्लगहरू, ब्लागहरू र कथा कथाहरू | Martech Zone
ब्लगहरू, ब्लागहरू र कहानी कथाहरू
शनिबार, अगस्ट 12, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
ब्रायन क्लार्क आफ्नो अन्तिम जोडी मा केहि मा छोयो पोस्ट copyblogger मा जुन मलाई लाग्छ कर्पोरेट ब्लगहरूको लागि 'हराइरहेको लिंक' हुन सक्छ।क्लग) ... कथा बताउनुहोस्।
मैले एक जोडी लेखेको छु पोस्ट त्यो कर्पोरेट ब्लगको आलोचनात्मक हो। कारण यो छ कि कर्पोरेट ब्लग केही हदसम्म अक्सीमोरन हुन सक्छ। धेरै कम्पनीहरूले ब्लॉगिंगलाई उनीहरूको मार्केटिंग प्रयासहरूको विस्तारको रूपमा हेर्दछन्, साथै वेब साइट, विज्ञापन र प्रेस विज्ञप्तिको साथ। अन्य कम्पनीहरू यस 'नयाँ मार्केटिंग माध्यम' मा चढाई रहेका छन्। अरे! आईएमएचओ, ब्लगहरू मार्केटिंगका लागि मानिदैन, तिनीहरू वास्तवमै तपाईंको पाठकहरू - कर्मचारीहरू, ग्राहकहरू र / वा सम्भावनाहरूसँग कुराकानी सिर्जना गर्नका लागि हुन् भन्ने मानिन्छ।
ब्रायनको अन्तिम जोडी प्रविष्टिहरु को सल्लाह हो कि यो तपाइँको प्रतिलिपि संग कथाहरु बताउन को लागी धेरै प्रभावी छ, र यो तपाइँको ब्लग मा विस्तार गर्न सकिन्छ। कस्तो राम्रो विचार! कम्पनीहरूले यो रणनीति अपनाउनु पर्छ। एक कहानी ईमान्दार, सान्दर्भिक र समयसीमा हुन सक्छ। कथाले राम्रो शब्दको विज्ञापन वा प्रेस विज्ञप्तिको पोष्टिंग बिना तपाईंको कम्पनीको सामर्थ्य चित्रण गर्न सक्दछ। र ... एक कहानी तपाइँको कम्पनी र मान्छे तपाइँको ब्लग पढ्ने बीच एक भयानक कुराकानी को शुरूआत हुन सक्छ।
कहानी कथन तपाईंको कम्पनीको लागि उत्तम रणनीति हुन सक्छ ब्लग, इन्न्सेन्सर र पूर्व-अनुमोदितको प्रतिक्रियालाई वेवास्ता गर्दै भराई.
आफ्नो कथा बताउनुहोस्। तपाइँका ग्राहकहरूका कथाहरू बताउनुहोस्। तपाइँको सम्भावनाहरूका कथाहरू पनि भन्नुहोस्।
भुक्तानी क्यालकुलेटर एनालिटिक्स
जुलाई,, २०१ at 21::2007। बिहान
दुर्भाग्यवश ब्लगि in मा मेरो अर्को चरण thats ...। र यस मा ठूलो पैसा शर्त 😛। मलाई आशा छ यो मेरो प्रयासको लागि मूल्यवान छ।